Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Honolulu ilaa Sydney: Hab cusub oo lagu duuliyo Hawaayiyaanka
Diyaaradda Hawaiyan ee Airbus A330
Hawaiyan Airlines ayaa maanta xaqiijisay inay dib u bilaabayso adeegeeda shanta jeer todobaadlaha ah ee u dhexeeya Madaarka Sydney Kingford Smith ee Australia (SYD) iyo Honolulu ee Daniel K. Inouye International Airport (HNL), laga bilaabo Disembar 13. Hawaiian, oo joojisay wadadii bishii Maarso 2020 sababtuna tahay. si loo xaddido xayiraadaha safarka ee lagu soo rogay bilowga masiibada, waxay ku soo dhaweyn doontaa Australiyaanka dib ugu noqoshada jasiiradaha iyada oo ay saxeexdo martigalinta Hawaiian waqtiga fasaxa.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan dib u xirno Hawaiʻi iyo Australia waxaana nagu dhiirri -geliyay jawaabta dadweynuhu ay ka bixiyeen barnaamijka tallaalka qaranka Australia, taasoo awood u siineysa dib -u -furista xuduudaha,” ayuu yiri Andrew Stanbury, oo ah agaasimaha gobolka ee Australia iyo New Zealand ee Hawaiian Airlines.
"Hawai'i waa meel aad caan u ah fasaxa Australiyaanka, waxaana ognahay in dad badani ay aad u sugayeen inay qaataan fasaxa Hawaiian. Waxaan sugeynaa inaan si nabadgelyo leh u soo dhaweyno martideena ku soo noqnoqda doonnida si aan ugu raaxeysanno soo dhaweynta dhabta ah ee aan ognahay inay martidayadu jecel yihiin oo ay seegeen, ”ayuu raaciyay.
HA451 waxay dib u bilaabmi doontaa Diisambar 13 iyada oo ka baxaysa HNL Isniinta iyo Arbacada ilaa Sabtida 11:50 subaxnimo waxayna imanaysaa SYD qiyaastii 7:45 galabnimo maalinta xigta. Laga bilaabo Dis. 15, HA452 waxay ka tagi doontaa SYD Talaadada iyo Khamiista ilaa Axadda 9:40 galabnimo iyadoo 10:35 subaxnimo loo qorsheeyay HNL, taasoo u oggolaanaysa martida inay soo galaan hoygooda oo ay bilaabaan inay sahamiyaan O'ahu, ama ku xidhmaan mid kasta oo ka mid ah afarta meelood ee Jasiiradaha Jaarka ah ee Hawaiian.
Guddoomiyaha Hawaiʻi David Ige ayaa todobaadkii hore soo dhaweeyey booqdayaasha dib u bilaabmay 1dii Nofembar hadda oo dadaallada caafimaadka dadweynaha ay ka dhex dhasheen heerarka ugu hooseeya ee COVID ee Mareykanka. Hawaiian Airlines ayaa bishii hore sidoo kale bilowday a muuqaal cusub oo duulimaad ah ku dhiirri -galinta booqdayaasha safarka Pono (si xilkasnimo leh) iyagoo ugu raaxeysanaya Hawai'i si ammaan ah oo xilkasnimo leh.
Marka laga soo tago duullimaadyada aan joogsiga lahayn ee ku socda Hawai'i, socotada Australiyaanka ah ee ku duulaya Hawada Hawaii waxay sidoo kale dib u helayaan marin u helida shabakadda gudaha Mareykanka ee baaxadda leh, taasoo u oggolaanaysa inay si aan kala go 'lahayn u sii wataan safarradooda 16-ka marinnada dhul-weynaha Mareykanka - oo ay ku jiraan meelaha cusub ee Austin, Orlando, iyo Ontaariyo, California - oo leh ikhtiyaarka lagu raaxaysanayo joogsiga Jasiiradaha Hawaiian.
Hawaiian waxay sii wadi doontaa inay ku shaqeyso waddada SYD-HNL oo leh 278-kursi, oo ah diyaarad ballaadhan oo ah Airbus A330, oo ay kujiraan 18 Premium Cabin kuraas maqaar-jiif ah, 68 ka mid ah kuraasteeda caanka ah ee raaxada dheeriga ah, iyo 192 kuraasta Qolka Weyn.
Hadda, muwaadiniinta Australiyaanka ah iyo deganeyaasha rasmiga ah ee soo noqonaya iyo xubnaha qoyskooda ayaa loo oggol yahay inay soo galaan Australia la'aan dhaafitaan. In kasta oo shuruudaha gelitaanka gobolka Hawai'i ay weli tahay in lagu dhawaaqo, Hawaiian waxay rajaynaysaa in gobolka Hawai'i uu waafajiyo shuruudihiisa sharciyada dawladda Mareykanka ee u baahan imaatinka caalamiga ah si ay u muujiyaan caddaynta tallaalka iyo tijaabada COVID-19 ee taban ee la qaaday saddex maalmood gudahooda ka dib bixitaanka. dhaqangal ah Noofambar 8.
Xeerarka caalamiga ahi way sii kobcayaan, dadka socotada ah waxa lagu dhiirigelinayaa inay la socdaan kanaalada rasmiga ah ee dawladda markay isu diyaarinayaan safarkooda.
Hawaiian waxay bilowday adeegga SYD-HNL bishii Maajo 2004 waxayna sii wadatay booskeedii ahaa horseed u noqoshada socdaalka Hawai'i iyada oo loo sii marinayo New South Wales. Adeegga saddex-jeer toddobaadlaha ah ee u dhexeeya HNL iyo Madaarka Brisbane (BNE), oo la bilaabay November 2012, ayaa weli hakad ku jira.
Booqo www.HawaiianAirlines.com si aad u aragto jadwalka duulimaadka iyo iibsashada tigidhada.